भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीको मुद्दा किन भयो भाइरल? यस्ताे छ कारण - Kantipath.com
भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीको मुद्दा नेपालमा चर्चाको विषय बनेको छ । यस्तो काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको वेलफेयर ब्रान्चको एउटा सूचना सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि भएको हो ।
भारतीय पत्रकारले लेख्छन् : गोर्खाली नभए कसरी चल्छ भारतीय सेना !
यसपछि यो सूचना अनलाइन मिडियामा निकै छायो । नेपालका नेता र जानकारले पनि यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया दिए ।यद्यपि, भारतीय सेनाले पछि यसमा संसोधन गर्दै यो भर्ती नेपाली महिलाका लागि नभएको बतायो ।
भर्ती सम्बन्धि जानकारीको विवरण अनुसार १० कक्षा पास नेपाली महिलाको नियुक्ति भारतीय सेनामा हुनसक्नेछ ।
यो विज्ञापन नेपालमा त्यतिबेला चर्चा भयो जब यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर सोसल मिडियामा सेयर गरियो । यो सेयर गर्नेहरुमा भूपू परिवार नामको एउटा फेसबुक पेज पनि छ । यो फेसबुक पेजका सदस्य पूर्व भारतीय गोरखा हुन् ।
उक्त सूचनामा नेपाली महिलालाई यो आवेदनका लागि अनुमति छ भनिएको छैन तर शैक्षिक विवरणको स्थानमा १० कक्षा पास नेपाली गोरखा महिलाबारे पनि कुरा गरिएको छ ।
यद्यपि, यो जानकारी अब भूपू परिवारको पेजमा छैन । यो जानकारी त्यतिबेला सोसल मिडियामा भाइरल हुन थाल्यो जब मानिसहरुले सोसल मिडियामा नेपालको जानकारी बिना भारतीय सेनाले नेपाली महिलालाई नियुक्त गर्न लागेको बताइयो ।
यद्यपि, कतिले यसलाई नेपाली महिलाका लागि अवसरको रुपमा पनि पेश गरे ।
अनलाइन मिडिया र सोसल मिडियामा जानकारी फैलिएपछि गोरखा रेजिमेन्टमा बहालीका लागि युवालाई तयार पार्ने प्रशिक्षण केन्द्रले पनि यसको प्रचार गरे ।
तालिम सेन्टर चलाउनेहरुले विश्वसनीय फेसबुक पेज र अनलाइन न्यूज माध्यममा खबर देखेपछि आफूहरुले प्रचार गरेको बताए ।
एमाले नेता भीम रावलले भारतको यो कदम सम्झौताको उल्लंघन भएको बताए ।
यस्तै एमालेका अर्का नेता विजय पौडेलले पनि नेपालीहरुलाई विदेशी सेनामा भर्नो गर्ने प्रणालीमा रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
भारतीय सेनाले गल्ती सुधार्योः
भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त कर्नल तथा फेडरेशन अफ एक्स सर्भिसम्यान एण्ड पुलिस वेलफेयर नेपालका धन बहादुर थापाले बयान जारी गरेर विज्ञापनमा गल्ती भएको र भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको नियुक्तीमा मानिसहरुको विभिन्न बयानमाथि दुःख पनि व्यक्त गरे ।
फेडरेशनले मानिसहरुलाई भारत र नेपालबीच तनाव उत्पन्न गराउने किसिमका बयान दिनबाट बच्न अपिल गरेको छ ।
विदेशी सेनामा नेपाली महिलाः
Previous Previous post: अमेरिकाले ५ करोड खोप वितरण गर्दै, नेपालले सिधै नपाउने
Next Next post: केही खुकुलो पारियो बागलुङमा निषेधाज्ञा
४ वर्षिया बालिका बलात्कारको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
अमेरिकाले डब्लूएचओलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गरौं: भवानी राणा
पानीजहाज कार्यालयको यस्ताे छ बिजोग
युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन पाँच राउन्ड हवाई फायर